No SA bailout for Zimbabwe after Ramaphosa visit - The Zimbabwe Mail
HomeEconomic AnalysisNo SA bailout for Zimbabwe after Ramaphosa visit
No SA bailout for Zimbabwe after Ramaphosa visit
March 12, 2019 Staff Reporter Economic Analysis, Headlines 0
HARARE (AFP) – President Cyril Ramaphosa concluded a much-anticipated visit to Zimbabwe on Tuesday, dashing any lingering hopes that his country would bail out its economically-troubled neighbour.
But otherwise he made no concrete offer of help, voicing a “commitment to work with Zimbabwe in addressing the socio-economic challenges”.
Last year Zimbabwe requested $1.2 billion in emergency credit from South Africa, but Pretoria indicated it did not have the funds.
“We’re not giving them a single loan,” President Mokgweetsi Masisi said in Gaborone after a visit to Harare, dismissing media reports that the credit was being made available by the state.
Mnangagwa took over after long time ruler Robert Mugabe was forced to resign in 2017, but is struggling to solve Zimbabwe’s economic crisis.
South Africa has borne the brunt of economic and political troubles in Zimbabwe. Millions of Zimbabweans have fled to South Africa following decades of economic turmoil.